एउटा अग्लो मान्छेसँग ‘ए मेरो हजुर ३’ : एकछिन विद् अनमोल
By soniya on	 10th April 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
अनमोल केसी नेपाली मूलधार फिल्मका अग्ला मान्छे हुन् । उनी अभिनित फिल्मले बक्सअफिसमा पैसा छाप्छन् । तर, पैसा कमाउने उद्देश्यले फिल्म बनाउने नियतमा उनको असहमति छ । उनलाई पर्सनल्ली अन्डरडग फिल्म मनपर्छ । दर्शकका लागि फिल्म खेल्न चाहन्छन् तर पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र हुनुभएन । शुक्रबार उनको पछिल्लो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ रिलिज हुँदैछ । मूभिमान्डु सम्पादक विष्णु शर्मासँग केसीले यी विविध आयाममा कुरा गरेका छन् :
ए मेरो हजुर ३ फिल्मले तपाईंको करियरमा कस्तो अर्थ राख्छ ?
मेरो लागि पनि ड्रीम प्रोजेक्ट हो । झरना दिदी (निर्देशक झरना थापा)सँग काम गर्नु मेरा लागि सपना थियो । उहाँबाट धेरै लेसन सिक्ने मौका पाएँ । म्युजिकल लभस्टोरी फिल्म हो । प्रेम र घनश्याम दुईवटा क्यारेक्टर भएपनि त्यसको चारपाँच लुक्समा प्रस्तुत हुँदैछु । स्टार म्युजिसियनको लभस्टोरीमा आधारित फिल्म भन्दा यसलाई जसमा कमर्सियल तत्व सबै समावेश गरिएको छ । ड्रीम्स र क्याप्टेनमा म अफट्रयाक जान खोजेपनि यसमार्फत लभस्टोरीमा ब्याक भएको छु ।
फिल्मको कथा तपाईंको जीवनको कति नजिक छ ?
प्रेम भन्ने क्यारेक्टरसँग मेरो जीवन गाँसिएको महसुस गर्छु । घनश्याम मेरा लागि फरक च्याप्टर थियो जसरी मुला तरकारी, चिनी र चप्पलमा घुम्ने क्यारेक्टर । त्यो घनश्याम मभित्र पनि छ जुन चीज लुकेर बसिरहेको छ । घनश्यामभन्दा पनि प्रेम क्यारेक्टरलाई अझ बढी मैले रिलेट गर्न सकेको थिएँ ।
स्टार र फ्यानबीचको द्धन्द्धात्मक सम्बन्धलाई जसरी फिल्ममा चित्रण गरिएको छ, वास्तविक जीवनमा चाहिँ कस्तो छ ?
फ्यानसँग चाहिँ सँधै एउटा बाउन्ड्री छ मेरो । म फ्यानलाई लभ गर्छु तर त्यसरी पनि गर्दिन । दियर इज अलवेज अ बाउन्ड्री । मेरो फ्यानहरुले पनि मलाई त्यसरी अप्रोच चाहिँ गर्नुभएको छैन । उहाँहरुलाई सीमाबारे थाहा छ र मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ । खासै फिल्मको जस्तो चाहिँ छैन ।
‘ए मेरो हजुर ३’को बलियो फ्याक्टर कुन हो ?
सबैभन्दा स्ट्रङ फ्याक्टर झरना दिदी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने उहाँको अनुभव उद्योगमा छ । उहाँले उद्योगलाई राम्रै स्टडी गर्नुभएको छ । मैले यो फिल्म चुज गर्नुको अर्थ, म आफैलाई पनि हरेक दृश्य पनि इन्टरटेनिङ लाग्यो ।
तपाईंले आर्ट हाउस, लार्जर द्यान लाइफ र अन्डरडग फिल्म सबैमा काम गर्न रुचि देखाउनुभएको छ । तपाईंलाई मनपर्ने चाहिँ कस्तो हो ?
मलाई पर्सनल्ली अन्डरडग र क्रिटिकल्ली रुचाइने फिल्महरु मनपर्छ । तर, बजार र दर्शक जस्ता छन्, उहाँहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन जसले गर्दा म कमर्सियल फिल्ममा लागेको छु । अन्डरडग फिल्ममेकर साम्तेन भुटिया, अपिल विष्टसँग पनि भविष्य प्रोजेक्टलाई लिएर कुरा भैरहेको छ । तर, दर्शकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेरै म अगाडि बढ्नेछु ।
तपाईंलाई कन्टेन्ट वा स्टारडममा रुचि राख्नुहुन्छ पछिल्लो समय ? किनभने स्टार अभिनित फिल्म चलिरहेका छैनन् ।
मलाई स्टार भनेको जस्ट फर द ओपनिङ जस्तो लाग्छ । चल्ने भनेको कन्टेन्ट नै हो ।
डेब्यु गर्ल सुहाना थापा र तपाईंबीच फिल्ममा कत्तिको रसायन निर्माण भयो ? सजिलो, गाह्रो कस्तो भयो ?
उसका लागि फस्ट फिल्म भएपनि झरना दिदीले पहिल्यैदेखि ग्रुम गरेर ल्याएको मैले फिल गरेँ । को–एक्टरले दिनुपर्ने इमोसन र सपोर्ट मैले एकदमै पाएँ । त्यो हुँदा एउटा सिन गर्न मजा पनि आउँदो रैछ । सिन मर्दो पनि रैनछ । स्क्रिप्टमा लेखिएको भन्दा को–एक्टरले दिँदा त्यो सिन अझै निर्माण हुँदै जाने रैछ । जुन कुरा सुहानासँग मैले प्राप्त गरेँ ।
तपाईंको विचार र अनुभवमा अहिलेको योङस्टरले कस्ता खाले फिल्म हेर्न रुचाउँदा रैछन् ?
अहिलेको योङस्टर सँधै नयाँको खोजीमा हुन्छन् । किनभने उहाँहरुले हरेक चीजहरु हलिउड र बलिउडमा हेरिरहेको हुन्छ । हाम्रो मार्केट स्टडी गर्दा मलाई किन किन उनीहरु साउथ इन्डियन फिल्मप्रति रुचि भएजस्तो लाग्छ । किनभने हरेक फिल्महरु ट्रेन्डिङमा परिरहेको हुन्छ । व्यवसायिकरुपमा उहाँहरुले नयाँ कन्टेन्टका फिल्म रुचाइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई ।
वर्ष २०७६ मा नेपाली फिल्म कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला ?
सबैभन्दा पहिला, धेरै फिल्महरु दर्शकको आँखा छल्ने गरि बनिरहेका छन् । यसमा हामी राम्रा निर्माता र कलाकार पनि मिसिइरहेका छौं । दर्शकले यसमा भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । मेकर्ज पनि नयाँ चीज गर्ने बेला आइसकेको छ । उद्योगलाई माथि उठाउनभन्दा पनि कोही चाहिँ कमर्सियल सोचबाट मात्र अघि बढिरहेका हुन्छन् । पैसा जतिसुकै लागोस राम्रो फिल्म दिऊँ, भन्ने निर्माता पनि छन् । दर्शकले यो भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ । मार्केटको अहिलेको अवस्था हुनुमा व्यापारको लागि मात्र बनाइएका फिल्मले गर्दा भएको हो ।
फिल्ममा निर्देशकभन्दा एक्टर प्रभावी हुँदा समस्या सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैन ?
दुबैजनाको राम्रो ट्युनिङ हुनु जरुरी छ । निर्देशकले एक्टरको भिजनलाई बुझ्नु जरुरी छ र एक्टरले पनि निर्देशकको बाउन्ड्रीभित्र बसेर अभिनय देखाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । टीमवर्क हो यो ।
यसपछाडि तपाईंको योजना कस्तो छ ? कुनै फिल्म गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म कुनै फिल्म गर्दैछैन । कुराहरु भैरहेको छ । सायद म ५ देखि ६ महिना ग्याप लिन्छु होला । ब्याक टु ब्याक फिल्मले गर्दा म स्ट्रेस पनि भैराख्या छु । आइसकेपछि आफूलाई ग्रुम गरेर, नयाँ चीज लिएर अघि बढ्ने सोचमा छु ।